Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Southwest Airlines na -ekwupụta Onye isi ala ọhụrụ
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Akpọrọ Mike Van de Ven ka ọ bụrụ Onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ, na -amalite ozugbo.
Gary Kelly, Onye isi oche na onye isi oche Southwest, kwupụtara n'aha ndị isi nchịkwa Southwest Airlines na akpọrọ Chief Operating Officer Mike Van de Ven, 59, dị ka Onye isi oche ụlọ ọrụ, na -amalite ozugbo. Van de Ven ga -eburu ibu ọrụ ndị ọzọ nke nyocha nke ime ụlọ ọrụ, ọganiru azụmahịa, nzaghachi mberede na ọrụ njikwa ihe egwu.
A mara ọkwa mgbanwe ndị isi na Southwest Airlines.
Tom Nealon ekpebiela ịla ezumike nka n'ọrụ ya dị ka Onye isi oche ozugbo.
Southwest Airlines Co. kwupụtara mgbanwe ndị ndu taa.
Tom Nealon, 60, ekpebiela ịla ezumike nka n'ọrụ ya dị ka Onye isi ala ozugbo, mana ọ ga -aga n'ihu na -ejere Companylọ ọrụ ahụ ozi dị ka onye ndụmọdụ atụmatụ, na -elekwasị anya na nkwalite gburugburu ebe ụgbọ elu na atụmatụ mbelata ikuku. Nealon ejidela ọtụtụ ọkwa onye ndu n'oge ya na ndị ọrụ ụgbọ elu, gụnyere onye isi oche onye isi ala Strategy & Innovation site na 2016 ruo 2017, onye isi na Southwest Board site na 2010 ruo 2015, yana n'ike onye ndụmọdụ dị ka onye osote onye isi ala na onye isi mgbasa ozi sitere na 2002. ruo 2006.
Nealon kwuru, "Enwere m nsọpụrụ na m jere ozi na Southwest n'ime afọ niile n'ọtụtụ ọrụ dị iche iche, ọkachasị ịbụ onye isi ụgbọ elu kacha mma na azụmaahịa a," Nealon kwuru. "Ana m atụ anya ịga n'ihu na-eje ozi ma na-adụ Southwest ọdụ na atụmatụ atụmatụ, na nke kachasị mkpa, na atụmatụ nkwado gburugburu ebe obibi ogologo oge."
Gary Kelly, Onye isi oche na onye isi oche Southwest, mara ọkwa n'aha nke Southwest Airlines Kọmitii Nduzi nke akpọrọ onye isi ọrụ Mike Van de Ven, 59, ka ọ bụrụ onye isi oche ụlọ ọrụ, na -amalite ozugbo. Van de Ven ga -eburu ibu ọrụ ndị ọzọ nke nyocha nke ime ụlọ ọrụ, ọganiru azụmahịa, nzaghachi mberede na ọrụ njikwa ihe egwu.
“Achọrọ m ikele Tom maka onyinye ya na -enweghị atụ maka ihe kpatara ụgbọ elu Southwest kemgbe ọtụtụ afọ - ha dị ọtụtụ na enweghị atụ. Enwere m ekele na Tom ga -aga n'ihu na -eje ozi dị ka onye ndụmọdụ atụmatụ. Enwere m obi anụrị maka Mike ka ọ na -ewere ọrụ ọhụrụ ya dị ka Onye isi ala, na mgbakwunye na COO. Mike bụ onye ndu nwere nka na onye raara onwe ya nye dị ka mmadụ ga -ahụ, o tinyekwala aka na ihe ịga nke ọma Southwest n'ime afọ iri abụọ na asatọ ọ na -ejere ụlọ ọrụ ahụ na ndị anyị.
Mgbalị mgbanwe nke onye isi oche onye isi ala na onye isi na -abata Bob Jordan na -eduzi na -aga nke ọma, ka nke ahụ na -agakwa n'ihu, anyị na -eme ihe iji gbanwee ọrụ mkpesa na nkwadebe maka Bob ịmalite ọrụ onye isi na February 1, 2022. Kelly.
Ka ntughari ahụ na -aga n'ihu, ndị otu ego, azụmaahịa, iwu & nchịkwa, ọrụ na teknụzụ na -akọrọ Kelly ma ọ bụ Nealon ga -akọrọ Jordan ugbu a, ọ ga -adịkwa irè ozugbo.
"N'aha ndị isi oche, ọ ga-amasị m ikele Tom maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ise dị ka Onye isi ala yana ihe karịrị afọ iri na ise nke ọrụ ndị ọrụ ụgbọ elu Southwest Airlines anyị, ndị ahịa anyị, ndị na-ekenye ihe na obodo anyị na-ejere ozi," Onye isi ndị isi ụgbọ elu Southwest William Cunningham. "Anyị nwere oke nganga na anyị nwere ụdị onye ndu nwere ikike na nke siri ike na Southwest Airlines, anyị nwere obi ụtọ na ọkwa Mike Van de Ven dị ka onye ga -anọchi Tom."